पार्टी एकता निकट भविश्यमै हुन्छ, दुई दिनमै पनि हुन सक्छः ओली| Nepal Pati
पार्टी एकता निकट भविश्यमै हुन्छ, दुई दिनमै पनि हुन सक्छः ओली
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच छिट्टै पार्टी एकता हुने बताएका छन् । युवा संघ नेपालको २८ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले निकट भविश्यमै एकता हुने बताए । उनले भने ‘पार्टी एकता निकट भविश्यमै हुन्छ, एक दुई दिनमै पनि हुन सक्छ ।’
स्वर्णिम मसी ठिक पारेर राखे हुन्छ
ओलीले आफूले राष्ट्र हित विपरित कुनै पनि काम नगरेको तर्क गर्दै गरेको पाईए प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन चेतावनी दिएका छन् । संघका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले युवा संघ स्थापना गर्दा परिस्थिति प्रतिकुल भएपनि अहिले अनुकुल परिस्थिति रहेकाले सशक्त रुपमा अगाडि बढ्न युवालाई आग्रह गरे । उनले १९ वर्षको उमेरदेखि आफू निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा होमिएको उल्ल्ेख गर्दै भने ‘युवा परिवर्तनका संवाहक हुन् र सार्थक पार्ने पनि उनीहरू नै हुन् । युवा युवा जस्तो हुनुपर्छ । अहिले मैले म्याराथुन दौडन्छु भनेर हुन्छ र ? त्यो युवाले मात्रै सक्छ । हामीजस्ता बुढाहरूले दौडको सुरुवात मात्रै गर्ने हो । के मैले १९ वर्षको उमेरमा गरेको काम जस्तो अहिले ६७ वर्षको उमेरमा सोचेको भए हुन्थ्यो ! त्यसैले युवा भनेका युवा नै हुन् ।’
आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरकार अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘यो स्वर्णिम युग हो । यो युग स्वर्णिम भनेर इतिहासमा लेखिन्छ, स्वर्णिम मसी ठिक पारेर राखे हुन्छ ।’
देश शुद्धिकरणको अभियानमा
उनले देश शुद्धताको अभियानमा अगाडि बढेको पनि बताए । भने ‘विकास हुन्छ, सिण्डिकेट हामीले तोड्यौँ । सुनकाण्ड ब्रेक मात्र लागेन, ठिक पारियो । यो वर्ष मात्र तीन हजार सात सय ९६ केजी सुन नेपालमा आयो । तपार्इ हामीले लगाउने एउटा टप र सिक्रीको कुरा मात्र हो र त्यति धेरै सुनको कुरा छ ? हामीसँग माइक्रोस्कोप, माइनाकुलर जस्ता विभीन्न यन्त्रहरू छन् । अव हामी गैरकानुनी काम हुन दिन्नौँ ।’ भ्रष्टाचारी, कालोबजारी अन्त्य गर्न दृढ रुपमा सरकार अगाडि बढेको उनले बताए । युवा संघलाई पनि सोही अनुरुप अगाडि बढ्न उनले निर्देशन दिए ।
विश्व समुदायबीच आपसी सम्बन्ध कायम गर्छौ
ओलीले दुई छिमेकी देश भारत र चीन मात्र नभइ विश्व समुदायबीच आपसी सम्बन्ध कायम गर्ने बताए । ‘नेपालमा अन्योलता सिर्जना गर्न खोज्ने विपक्षीहरू धेरै छन् । भारतसँग व्यापार घाटा छ । भारतले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव गरेको छु । डुबानको समस्या हटाउन तत्काल हामीले संयुक्त टोली पठाउने निर्णय गरेका छौँ । यो सुन्दा हिजो बाँध बाँधेर राख्नेहरूलाई पक्कै पीडा होला ।’ भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सफल भएकोे पनि उनले बताए ।
पाँच वर्षभित्र रेल चल्छ
एकवर्षभित्र रेलको सर्वे सक्ने र पाँच वर्षमा रेल चल्ने ओलीले दावी गरे । उनले भने ‘हामी रेल मात्रै चलाउँदैनौँ । रेलमा के लाने, के ल्याउने भन्नेतर्फ पनि हामी अहिलेदेखि नै लाग्छौँ । रेलबाट सामान विदेश निर्यात गर्ने गरी उत्पादन बढाउन लाग्छौँ ।’ नेपाललाई आइटीमय बनाउने उनको उद्घोष छ । पाँच वर्षभित्र कोही पनि नेपाली भोको, नाङगो, आवास विहीन नहुने उनको जिकिर छ । उनले केही समयमै विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने समेत बताए ।
क्रान्तिप्रतिको विश्वासलाई अटल बनाइराख्नुपर्छः खनाल
कार्यक्रममा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, रक्षा गर्ने, समाजवाद निर्माण गर्ने काममा युवाले पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको बताए । ‘युवा संघलाई लाखौँलाख युवा भएको संगठन बनाउनुपर्छ ।’ उनले भने ‘क्रान्तिप्रतिको विश्वासलाई अटल बनाइराख्नुपर्छ ।’ खनालले राष्ट्रिय नीतिमा परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भारतसँगको सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको र चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि थप सुधार्न आवश्यक रहेको बताए ।
गणतन्त्र आउन आम जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन आवश्यक भएकोमा उनले जोड दिए ।
नेता माधवकुमार नेपालले छिट्टै पार्टी एकता गरेर समृद्धि र स्थायित्वको दिशामा मुलुकलाई लगिने बताए ।
पार्टीका महासचिव एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले युवाहरुमा सही विचार, विधि र नेतृत्वलाई मान्ने क्षमता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।